युएईमा मनी लाउन्डरिंग केसहरूमा विशेषज्ञ वकिललाई भर्ती गर्दै - कानून फर्म दुबई
युएईमा मनी लाउन्डरिंग केसहरूमा विशेषज्ञ वकिल
आर्थिक सेवा अपराधीहरु द्वारा पैसा को स्रोत भेस गर्न विधि वर्णन गर्न प्रयोग भएको सामान्य शब्द भनेको मनी लान्डरिंग वा हवाला हो। आपराधिक कार्यहरूबाट प्राप्त आम्दानीहरू एक वैध स्रोतबाट आएको देखिन्छ भने लुकेका छन्।
कर चोरी, फोहोर पैसा र कानून प्रवर्तन
मनी लान्ड्रिंग अवैध छ
वित्तीय संस्था मार्फत वित्तीय कार्य
वित्तीय सेवा क्षेत्र द्वारा उपलब्ध गराईएको उत्पादन र सेवाहरूको प्रकृतिले क्षेत्रलाई उजागर गरेको पैसालाई दुरुपयोग गर्न उजागर गर्दछ। विश्व भर मा, मनी लान्ड्रिंग को अपराधहरु को समान सुविधाहरु छन्।
यो अपराध गर्न दुई कम्पोनेन्टहरू छन्। उनीहरु:
मनी लाउन्डरिंग कार्य नै।
र कोष आपूर्ति वा ग्राहकको वित्तीय कार्यहरूको बारेमा ज्ञान वा अन्तर्ज्ञान।
मनी लान्ड्रिंग / हवालाले के हासिल गर्ने लक्ष्य राख्दछ?
पैसा लन्डरिंगले अपराधीलाई नगद वा पैसा कमाउनको लागि सजिलैसँग काम नगरीकन अवसर प्रदान गर्दछ। कानूनी तरिकामा पैसा कमाउनुको सट्टा अपराधीले स्थापनालाई बेवास्ता गर्दछ र करहरू तिर्नु बिना नै सजिलो नगद प्रवाह गर्दछ।
युएइमा कसरी मनी लाउन्डरिंग हुन्छ?
युएईमा, मनी लाँड्रिंग एक प्रक्रिया हो जुन तीन फरक चरणहरूमा देखा पर्दछ।
प्रक्रियाको पहिलो चरण भनेको सम्पत्ति र सम्पत्तीहरूको 'धुने' हो र स्रोतको रूपमा यसलाई बदल्ने उद्देश्यको साथ।
र एकीकरण, जहाँ laundered सम्पत्ति वैध बजार को लागी फिर्ता प्रस्तुत छ।
युएई, अबु धाबी, दुबई, र शारजाहमा, मनी लान्ड्रीering को जटिल रणनीतिहरू सजीलो देखि। तिनीहरू समावेश:
संरचना: यसमा जम्मा गर्न को लागी सानो रकम लिनु समावेश छ, त्यसपछि वाहक उपकरणहरू खरीद गर्नुहोस्, जसमा मनी अर्डर समावेश छ।
तस्करी: यो सामान्यतया एक विदेशी प्राधिकरणमा नगद तस्करी र एक अफशोर बैंक संग जम्मा, जो अधिक गोपनीयता छ वा मुद्रा अलि बढी साund्गना मात्र लागू गर्दछ।
नगद कम्पनीहरु: कम्पनीहरू जुन नगदी-गहन छन् उनीहरूले आपराधिक स्रोत र वैध नगद एकसाथ प्राप्त गर्न सक्दछन्, कि तिनीहरू सबै मान्य छन्। यसो गर्दा, कम्पनीसँग कुनै परिवर्तन लागतहरू छैनन्, र बिक्री-मूल्य असमानताहरू पत्ता लगाउन धेरै गाह्रो छ।
वाणिज्य आधारित धुलाई: इनभ्वाइसहरू अवैध नगद आन्दोलनहरू बदल्न अन्तर्गत वा बढी मूल्याued्कन गरिन्छ।
शेल व्यवसायहरू र ट्रस्टहरू: शेल कारोबार र ट्रस्टहरूले नगद मालिकहरूको वास्तविक पहिचान प्रकट गर्दैन।
बैंक क्याप्चर: मनी लान्डरिंग अपराधीहरूले गरीब मनी लान्ड्रीering नियन्त्रणको साथ वित्तीय संस्थामा कन्ट्रोलिling्ग हिस्सेदारी खरीद गर्दछन् र परीक्षा बिना पैसा हस्तान्तरण गर्दछ।
क्यासिनो: एक मनी लान्डरर क्यासिनोमा खेल्न सक्छ, चिप्समा क्यास इन, र भुक्तानी आवश्यक छ। त्यसपछि उसले यसलाई खेल जित्नेको रूपमा एक चेकको रूपमा जम्मा गर्दछ।
घर जग्गा अवैध कोष रियल ईस्टेट खरीद गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ, तब बिक्री गरियो ताकि बिक्रीबाट हुने नाफा बाहिरी व्यक्तिलाई मान्य देख्न सकिन्छ। सम्पत्तीको लागत झूटा हो र विक्रेताले तपाईंको करारमा सहमतिका लागि आपराधिक नाफाको एक अंश प्राप्त गर्दछ।
सजाय अवैध पैसा र कर ह्यास
फोहोर पैसा, आर्थिक अपराध, कर चोरी, अपराध को पैसा, बैंक गोपनीयता ऐन, आपराधिक गतिविधिहरु को लागी पैसा को लागी पैसा। दुबई वा युएईमा मनी लाउन्डरिंगको सजाय यस ऐनको अन्तर्राष्ट्रिय महत्वबाट आएको हो। मनी लान्ड्रिंग एक अत्यन्त गम्भीर अपराध हो र यदि तपाइँ वा तपाइँ कसैलाई थाहा छ कि मनी लाँड्रिंगको अभियोग लगाइएको छ भने, एक विशेषज्ञ मनी लाँड्रिंग वकिललाई तुरुन्त सम्पर्क गर्नु महत्वपूर्ण छ। मनी लान्ड्रिंग अपराधमा एक प्रमाणित वकिललाई काममा लगाएर, तपाईं कुनै पनि परिणामस्वरूप आपराधिक प्रतिबन्धहरूलाई कम गर्न वा यी आरोपहरूको विरुद्ध लड्न सक्षम हुनुहुनेछ।
आज कसरी तपाईंको मनी लाउन्डरि Law वकिललाई काममा लिने
मनी लान्ड्रिंग मामला जटिल र थकाऊ हुन सक्छ। यदि तपाईं गम्भीर पैसा-सुस्पष्ट आरोपको सामना गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईंले सकेसम्म चाँडो एक कुशल युएई कानूनी रक्षा सम्पर्क गर्नुपर्नेछ।
संघीय कानून /9 / २०१2014 (जसले संघीय कानून //२००२ लाई संशोधन गर्दछ जुन मनी लान्ड्रिंग अपराधसँग सम्बन्धित छ) (AKA The New AML Law) अप्रिल २०१4मा युएई फेडरल नेश्नल काउन्सिलले पारित गरेको थियो र अक्टोबर २०१ 2002 मा लागू भएको हो।
मनी लॉन्ड्रिंगको सजाय नयाँ एएमएल कानून अन्तर्गत कडा छन्
सामान्यतया, मनी लान्डरिंगको सजाय नयाँ एएमएल कानून अन्तर्गत पूर्व एएमएल कानूनको तुलनामा कडा हुन्छ। नयाँ एएमएल कानून अन्तर्गत, शicious्कास्पद लेनदेन रिपोर्ट गर्न असफल हुँदा A०,००० एईडी र ,50,000००,००० एईडी वा थुनामा परेको जरिवाना लिन सक्छ।
एक श who्कास्पद लेनदेन को बारे मा सोधपुछ गर्दैछ जो एक व्यक्ति टिपिंग एक वर्ष कारावास वा १०,००० AE र १०,००० AE बीच जरिवाना सम्म आकर्षित गर्दछ।
नयाँ एएमएल कानून पूर्व एएमएल कानून मा निर्माण गर्दछ। नयाँ एएमएल कानूनले गैरकानुनी वा दर्ता नभएका संगठनहरूको कोष, आतंकवादको कोष वा पैसा लन्डरिंग को कार्य देखि आयसम्बन्धी कोष को विनियोजन
मनी लान्ड्रिंग कानून धेरै कडा हो
अपराधीहरूले वित्तीय नेटवर्कमा कमजोर अ .्कहरू शोषण गर्छन्।